दसैं मान्न घर हिडेकी २३ बर्षीया लक्ष्मी बाटैमा अस्ताइन् – All top Here
वनभोज खान गएको सरकारी गाडी दुर्घटना प्रकाश,को मृत्यु
बुवाको किरिया बसेका छोराको दु’खद नि’धन!
साबधान ! तपाईंको चरित्र ह त्या मात्र होइन धनसम्पत्ति पनि गुम्ला ! मौलाउन थाल्यो यस्तो अपराध
बस दुर्घटना मा १८ जना को मृत्यु ३० जनाभन्दा बढी घाइते
भारतवाट मोटरसाइकल मा आएका सुरजलाई जाँच गर्दा प्रहरीकै उड्यो होस्
भर्खरै आयो डरलाग्दो घ’ट’नाको खबर… हर्नुस्
मौसम विज्ञान विभागले दियो २४ घण्टे चेतावनी
काठमाडौं उपत्यकाको नि षेधाज्ञा सकिन लाग्दा आयो यस्तो दुःखद खबर
Home/समाचार/दसैं मान्न घर हिडेकी २३ बर्षीया लक्ष्मी बाटैमा अस्ताइन्
दसैं मान्न घर हिडेकी २३ बर्षीया लक्ष्मी बाटैमा अस्ताइन्
सप्तरी । मुलुक दशैंको रौनकमा डुबिरहेको बेला शनिबार सिन्धुलीको सुनकोसी गाउँपालिका १ स्थित बीपी राजमार्गमा मिनी बस दु’र्घटना भयो । सो दुर्घट’नामा तीन जनाले ज्या न गुमाए ।
मृ’त्यू भएका तीन जनामध्ये एक थिइन्, राजविराज ७ निवासी २३ बर्षीया लक्ष्मी देव । दसैंका यात्रु लिएर काठमाडौंबाट सिराहा जाँदै गरेको बा ३ ख २३५९ नम्बरको मिनिबस काभ्रे र सिन्धुलीको सिमानामा दुम्जा नेपालथोक नजिक दु’र्घट’ना भएको थियो । दशैं मनाउन घरतर्फ आइरहेकी लक्ष्मीको दु’र्घट’नामा ज्या न गएपछि परिवार शो’काकुल छन् ।
लक्ष्मी काठमाडौंमा इन्जिनियरिङ्ग तेस्रो बर्षमा अध्ययनरत थिइन् । देव परिवारले ५ बर्षअघि पनि दशैंमा नै अर्का एक जना सदस्य गुमाएको थियो । २०७२ सालको दशैंमा मृ’तक लक्ष्मीका दाजु जितेन्द्रनारायण देवको ह’त्या भएको थियो ।
२०७२ साल असोज ३० गते उनको शव बरहीबीरपुर गाविसको नहर छेउमा फेला परेको थियो । सीएमए पास गरेका देव रोजगारी नपाएपछि पसल चलाएर गुजारा गरिरहेका थिए । उनको २०७२ सालकै वैशाख १७ गते झापाको शिवगञ्ज निवासी विष्णुमाया देवसँग विवाह भएको थियो ।
पतिको वियोगमा बिष्णुमायाको पनि ज्या न गइसकेको छ । ५ बर्ष बित्दा पनि उनको ह’त्याको कारण खुल्न सकेको छैन भने ह त्यारा पनि प क्राउ परेका छैनन् । छोराको मृ’त्यूको घाउ आलै रहेका बेला छोरीको पनिे दु’र्घ’टनामा परी ज्या न जाँदा बाबुआमाले अर्काे ब’ज्रपात सहनुपरेको छ ।
स्थानीय गणेशलाल भन्छन्, ‘बृद्व आमाबुवाको आँशु अझै थामिएको छैन । उनीहरु कसैसँग बोल्न समेत तयार छैनन् ।’ (अनलाइनखबर)
खोलामा डुबेर दुई बालक को मृत्यु
५ वर्ष जेल सजाय
कार र मोटरसाइकल ठोक्किँदा प्रहरी जवान र उनका बाबुको मृत्यु